Dhageeyso: Maamulka Koonfur Galbeed oo amar Cawaanimo ah ku soo rogay Radio Baraawe. — FAAFIYE.COM
By Editor	 On Apr 23, 2020
Maamulka iyo Shaqaalaha Radio Baraawe ee fadhigiisu yahay Degmada Baraawe ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa lagu amray in ay joojiyan barnaamijyada ku baxa afka Barawaaniga.
Waxaa xalay Xarunta Radio Baraawe tagay ciidan uu watay Gudoomiyaha Degmada, Cumar Sheekh Cabdi (Shafaana), waxa ayna Maamulka iyo Shaqaalahaba ku amrayn in hadda ka dib aanay baahin karin barnaamijyada ku baxa afka Barawaaniga.
Gudoomiyaha ayaa Maamulka Idaacadda u sheegay in barnaamijyadaasi laga soo dacwooday, sidaasi daraadeedna aynaan hadda ka dib sii baahin karin, inkastoo aanu si dhab ah u sheegin cidda ka soo Dacwootay. Waxayna tani layaab-gelisay Maamulka iyo Shaqaalahaba.
Radio Baraawe ayaa baahin jiray barnaamijyo dhawr ah oo ku baxa afka Barawaaniga, kuwaa oo laga xusi karo sida Barnaamijyada Malafaayow iyo Barbaarta, waana kuwa aadka loogu dhageysiga badan yahay.
Arintan ayaa qabsatay baraha bulshada iyadoo ay aad u layaabeen shacabka Soomaaliyeed sababta Keentay in Dad dowladnimo sheeganaya ay isku dayayaan in afka qabtaan qowmiyad dhan oo luqada baraawe ku hadla , Luqadaas oo ka da weeyn isla Dowlada gobaleedka koonfur Galbeed.
Maamulka iyo Shaqaalaha Radio Baraawe ayaa galabta u fadhiya kulan ay awaamiirtaasi ka leeyihiin, go’aankooduna ay dib ka soo saari doonaan.